March 2017 – Arakan Times
AT Burmese အပြစ်မဲ့ဆယ်အိမ်မှူးတစ်ဦးဖမ်းဆီး
March 31, 2017	Leaveacomment 598 Views
တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နယ်ခွဲဇီးပင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုချောင်းကူလားနှင့်မာဆီလ္လာရွာသို့နယ်ခြားစောင့်ဒုတပ်ရင်းမှူးအပါအဝင်၄၄ဦးနှင့်စစ်သား၃၅ဦးတို့သည်၃၀၊၃၊၂၀၁၇ခုနေ့နံနက်၉း၀၀နာရီအချိန်တွင်ဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်များကိုစစ်ဆေးကာဆယ်အိမ်မှူးဖြစ်သူဦးနော်ဇိရ်အာမတ်(ဘ)ဘော်ရှိရ်အာမတ်အားအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထားပြီးလူမဆန်စွာရိုက်နှက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။လူနေအိမ်များစစ်ဆေးနေစဉ်လူနေအိမ်ရှိအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း၊လူငယ်များကိုနာမည်စာရင်းတစ်ခုနှင့်စုံစမ်းနေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ကိုဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြောင်းAT newsသို့ပြောပါသည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူရေတွင်းပြင်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးဦးကျော်ဆွေ၊အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ဟိန်း(ကျော်ဆွေ၏လက်ကိုင်တုတ်)၊ကျော်ဆွေ၏ယောက်ဖအရင်းဖြစ်သူမြောချောင်းကျေရွာအဖွဲ့ဝင်ဦးလှတင်တို့သည်မဆီမဆိုင်ဘဲလာရောက်ခြင်းသာမကမခံချီမခံသာသောစကားများပြောခြင်းကိုဇီးပင်ချောင်းရွာသားများသည်းမခံနိုင်ကြောင်း AT burmese သို့ပြောပါသည်။
AT Burmese သရုပ်ဆောင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဦးရှည်ကျသို့ရောက်ရှိ
March 31, 2017	Leaveacomment 1,091 Views
မောင်တောမြို့ ဦးရှည့်ကျကျေးရွာသို့ EU သံတမန်အဖွဲ့မရောက်ရှိခင်မြန်မာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ မှကား၃စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာ၍ရိုဟင်ဂျာများကိုဆေးကုယောင်ဆောင်၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်သဘောဆောင်သောအပြုအမူများပြသနေသည်။အမှန်မှာမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှအခမဲ့ဆေးကုပေးခြင်းမရှိပေ။ EUမှသူတောင်းစားအစိုးရကအလှူငွေရရှိရန်လည်းကောင်း၊ကြင်နာမှုတရားရှိသောအစိုးရဟုမှတ်စေရန်လည်းကောင်း ဤကျန်းမာရေးအဖွဲ့သရုပ်ဆောင်ရန်ရောက်ရှိလာသောသိုးရေခြုံဝံပုလွေဖြစ်ကြောင်း AT burmese news မှတစ်ဆင့်သိစေအပ်ပါသည်။ ဦးရှည့်ကျ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နေသောဆွဲပိုက်သမားများအားဆွဲပိုက်ဖြင့်ငါး ရှာခွင့်ပေးလျှင်လုံလောက်ပေမည်။ကျန်းမာရေးဝန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါကြောင်း၊ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိူးများသည်သူတောင်းစားမဟုတ်ကြောင်း၊မိမိကိုယ်မိမိအားကိုးသူများဖြစ် ကြောင်းAT Burmese newsသို့ဦးရှည့်ကျဒေသခံများမှပြောပါသည်။
Breaking News: 100 Rohingya arrested in joint forces’ raid in Maungdaw North
March 31, 2017	Leaveacomment 1,238 Views
AT Correspondent, Maungdaw Myanmar army and BGP jointly have carried outasudden raid at Dudang (Ludaing) village tract, Maungdaw north causing people flee from the village and arrested nearly 100 Rohingya people today 31 March 2017 at around 11: am. Source said to our correspondent, the army jointly with BGP forces surrounded the Dudang village and started beating and ...
AT Burmese မြန်မာပြည်က ဆုံးနိုင်ဖွယ်လမ်းစ မမြင်သော ‘သူစိမ်းများ’
March 31, 2017	Leaveacomment 630 Views
မြန်မာပြည်က ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ လူနဲစု ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် အရေးနှင့် ပတ်သတ်လာလျှင် သူတို့နှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံရသော ကဏ္ဍအသီးသီးတို့၌ တိုင်းပြည်အား အမှန်တကယ်ခြိမ်းခြောက်နေကြသူများအဖြစ် သဘောထားကာ ဖိနှိပ် ချုပ်ခြယ်လာခဲ့ကြသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကာလရှည်ကြာစွာ တည်မြဲလာခဲ့သည့် ‘ကျူးကျော် သူများ’ ပေါ်လစီသည် သာမန်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူများစုများအကြား၊ အထူးသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးစုများအကြား၊တွင် ‘ပြည် ပရန်သူများ’ နှင့် ‘သူတစ်ပါးအပေါ် ဘယ်သောအခါမှ ထည့်တွက်စဉ်းစားစရာမလိုသည့် စိတ်နေသဘောထားများ’ကို အမှန် ဟူ၍ပင် မိမိဖာသာမိမိ ခံယူသွားစေရန် နှစ်ရှည်လများ ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းအကျိုးဆက်ကြောင့် ရိုဟင် ဂျာတို့မှာ မြန်မာထိပ်တန်း အာဏာပိုင်များက ဖန်တီးထားသည့် လုံခြုံရေးအရ ခွဲခြားဖိနှိပ်ကန့်သတ်ထားရမည့်အပေါ်တွင် အတည်တကျ ဖြစ်သွားစေခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအရ ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်ထားရမည့် သူများအဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆက် လက်နေထိုင်သွားကြရန် တွန်းအားပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားစေခဲ့တော့သည်။ ထိုသို့သော ...
Rohingya women detained for speaking with EU Commission in Maungdaw
March 31, 2017	Leaveacomment 1,762 Views
AT Correspondent, Maungdaw Myanmar security forces detained three Rohingya women from KyaGanTaung of Maungdaw on 30 March for speaking with the EU delegation that recently visited. The 10 member European Union Commission visited the IDP camps in Sittwe where they observed the living condition of Internally Displace Person camp and talked to the refugees on 29 March 2017. The commission ...
AT Burmese မြန်မာပြည်သူတို့ ဆင်းရဲမွဲတေစေသည့် အကြောင်းတရား
March 30, 2017	Leaveacomment 815 Views
၁၉၈၈ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာပြည်သူအများစုက ဒီမိုကရေစီစနစ်သည်သာ ပြည်သူအားလုံးအား ဆင်းရဲမွဲ တေမှုတွင်းနက်ထဲမှ ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီ ၏အဓိကရန်သူများဖြစ်ကြသော စစ်အာဏာရှင်များက မိမိတို့၏ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနှင့် အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဦးစွာပထမပေါင်ချိန်ရုပ်ရှင်၊ ထို့နောက်ဓမ္မာရုံ၊ ၎င်းမှတစ်ဖန် ဖေါင်ကြီးသင်တန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခြင်းစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်များအသုံးပြုလျက် ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူများစွာတို့အား မတရားဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့သော စွမ်းအားရှင်များ အာဏာရလာပြီးနောက် ၉၆၉ နှင့်မဘသတို့ကို စနစ်တကျဖန်တီးခဲ့ပြီး “ပြည်သူကို ပြည်သူနှင့် နှိမ်နင်းစေ”ဟူသော မူဝါဒအတိုင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများပျံ့နှံ့စေလျက် ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရကို သတိမရအောင် ဝါဒ ဖြန့်စေ့ဆော်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ၂၀၁၂မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ အကြမ်းဖက်မှုများ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖန်တီးစေလျက် မြန်မာပြည်သူတို့ပို၍ ဆင်းရဲမွဲတေအောင် ကြံစည်ဆောင်ရွက်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ စစ်အာဏာရှင်များ၊ ခရိုနီ များ၏ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများ ဆထက်တိုးပွားလာအောင် အကွက်ဆင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးဦးကိုနီက ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ၁၃နှစ်တာကာလအတွင်း ...
BGP and army conducts fresh raid in Maungdaw North
March 30, 2017	Leaveacomment 819 Views
AT Correspondent, Maungdaw Amid the visit of EU delegation in Maungdaw, two groups of army and Border Guard Police (BGP) besieged the Massillapra of Maungdaw north and conducted raid in the village tract arresting several men including women Thursday 30 March 2017 at around 9: 00 am, according to correspondent report The EU delegation visited the Kyar Gan Taung, Wapet, ...
Myanmar army uniforms seized, 1 arrested in Teknaf
March 30, 2017	Leaveacomment 995 Views
AT Correspondent, Teknaf Bangladesh customs department has seized lots of Myanmar military uniforms and badges including other wearing things at the Teknaf land port on 29 March 2017. The uniforms concealed inside the tamarind seeds, pickles and other commercialized commodities brought to Teknaf land port from Myanmar were recovered through search on 29 March 2017. After the operation in the ...
AT Burmese မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အသက်စတေးနေရသူများ
March 30, 2017	Leaveacomment 1,117 Views
၇၂-နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာမရှိ” ဟု ပြောခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြညနှင့် အာနန်ကော်မရှင်တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး စံအဖြစ် “ရိုဟင်ဂျာ – ဘင်္ဂလီမသုံးရေး” မူကို ဆန့်ကျင်ရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီပျိုးပင်ကြီးထွားလာမည်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က အန္တရာယ်ဟု စိုးရိမ်မိ ကြောင်း ထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈မှစ၍ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အသက်စတေးနေရသော ရဟန်းသံဃာ ပြည်သူအပေါင်းမြောက် များစွာရှိသည်။ ၂၀၁၂မှစ၍ စစ်အာဏာရှင်များက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအသုံးချ၍ လူမျိုးဘာသာရေးမုန်းတီးမှုများကို ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမသဖွယ် ဝါဒဖြန့်မှိုင်းတိုက်နေမှုသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကြီးမား ဆုံးရန်သူဟု သဘောထားသော စစ်အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ဖက်ဆစ်မူဝါဒပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ယနေ့အထိအသက်စတေးနေရသူများမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များပင်ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာ ၉ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ခဲ့သော “တုတ်၊ ဓါးကိုင်ဆောင် သည့်တော်လှန်ရေးသမား”ကို တပ်မတော၏ ရှိသမျှ စွမ်းပကားသုံး၍ “မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရေး” စီမံကိန်း ကြောင်နိုင်ငံတော်သိက္ခာလည်း ...
Wood cutter assaulted by BGP in Btd
March 30, 2017	Leaveacomment 1,643 Views
AT Correspondent, Btd A Rohingya wood cutter was assaulted by Border Guard Police while collecting firewood in the forest on 29 March 2017 in ThaPeikTaung (Kezinggapara), Buthidaung. The victim was known as Shomsul Alam (35) son of Nurul Islam of ThabbeyTaung. The victim isawoodcutter by his profession who in the morning went to the forest to collect firewood ...